कोमाका विरामीलाई स्वदेश ल्याउन सुरू, पहिलो विरामीको ट्रमामा उपचार हुँदै - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ कोमाका विरामीलाई स्वदेश ल्याउन सुरू, पहिलो विरामीको ट्रमामा उपचार हुँदै
कोमाका विरामीलाई स्वदेश ल्याउन सुरू, पहिलो विरामीको ट्रमामा उपचार हुँदै
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७६ असार १८ गते, ०८:०५ मा प्रकाशित
दक्षिण कोरियाबाट ल्याइएका झापाका ओमनाथ ढकाल
काठमाडौं—सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशका विभिन्न अस्पतालको कोमामा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन थालेको छ । गम्भीर प्रकृतिका विरामीलाई स्वदेश ल्याउने क्रममा झापाका ओमनाथ ढकाललाई स्वदेश ल्याएर उपचार सुरु गरिएको हो ।
४१ वर्षीय ढकालको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको न्युरो वार्डमामा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ । यसअघि उनलाई वीर अस्पतालको आइसीयुमा राखिएको थियो । सोमबार विहानमा उनलाई ट्रमा सारिएको हो ।
दुई वर्षअघि कोरियामा गएका ढकाललाई ब्रेन हेमरेज भएको वीरका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले जानकारी दिए । ‘ब्रेन हेमरेजका साथै मल्टिपल समस्या छ । प्यारालाइसिस भएको छ,’ डा. सेन्चुरीले भने । ढकालले इसारा मात्र गर्न सक्छन् । बोल्न सक्दैनन् । उनी सात महिनादेखि कोरिया, बुसानस्थित नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा कोमामा रहेका थिए ।
ढकालजस्तै कोमामा रहेका २८ नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउने योजना रहेको बैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा करार अवधिभित्र दुर्घटनामा परी कोमामा रहेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार, कुबेत, युएईलगायत विभिन्न मुलुकमा विभिन्न अस्पतालमा कोमामा रहेका २८ कामदारलाई स्वदेश फर्काइने बोर्डले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा असार ८ गते बसेको बैठकले विरामी ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।